हाम्रो भित्रको समस्या विदेशीका सामू ‘फिराद’ गर्ने विषय होइन —डा. जयराज आचार्य ,संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वराजदूत हाम्रो भित्रको समस्या विदेशीका सामू ‘फिराद’ गर्ने विषय होइन —डा. जयराज आचार्य ,संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वराजदूत
हाम्रो भित्रको समस्या विदेशीका सामू ‘फिराद’ गर्ने विषय होइन —डा. जयराज आचार्य ,संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वराजदूत
By:Maitri News Published Date: १ जेष्ठ २०७५, मंगलवार ११:४३ at १ जेष्ठ २०७५, मंगलवार ११:४३ Interview, Mobile News, Mobile-Top-Ad-Slider
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दुई दिनको नेपाल भ्रमण पूरा गरेर स्वदेश फर्किसक्नुभएको छ । तर, उहाँको नेपाल भ्रमणको विषयलाई लिएर अहिले पनि निकै चर्चा परिचर्चा हुने गरेका छन् । कसैले विरोध गरेका छन् भने सकैले मोदीको नेपाल भ्रमण फलदायी र नेपालको हितमा भएको भनेका छन् । यिनै विषयमा केन्द्रित भएर संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व राजदूत समेत रहनुभएको डा. जयराज आचार्यसँग मैत्रिन्युजका लागि मोहन बास्तोलाले गरेको कुराकानीः
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ ?
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण सकारात्मक हो । कूटनीतिमा वार्तालाभ, भेटघाट, आवतजावत निकै महत्वपूर्ण कुरा हुन्छ । नरेन्द्र मोदी सन् १९१४ मा प्रधानमन्त्री हुनु भन्दा अघि १७ वर्षसम्म नेपाल भ्रमणमा भारतको कुनै पनि प्रधानमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउनु भएको थिएन । त्यति मात्र होइन उहाँ प्रधानमन्त्री भएको तीन–चार वर्षमा तीन पटक नेपाल भ्रमणमा आउनु भएको छ । नेपालमा प्रधानमन्त्री पनि यो अवधिमा तीन–चार पटक भारत भ्रमणमा जानुभएको छ । यो सकारात्मक कुरा हो ।
नेपाल–भारत सम्वन्धमा समस्या छैन भन्ने होइन, समस्या छन् । तर, ती समस्याहरु समाधान गर्नलाई पनि त भेटघाट, छलफल, आवतजावत त चाहियो नि ? हो, त्यसकारणले यो भेटघाट छलफल कुटनीतिक हिसावले ठिक छ ।
मोदीको नेपाल भ्रमणले कूटनीतिक सन्तुलन भए पनि नाकाबन्दीको पीडामा चाहिँ मल्हम लागेन भन्ने पनि छ नि ?
मोदीजीको नेपाल भ्रमण त्यही नाकाबन्दीको पीडा कम गर्ने उद्देश्यले पनि हो भन्ने लाग्छ । नाकाबन्दीका बेला अहिलेकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले त्यसैबेला पनि नाकाबन्दी नहटाएसम्म भारतको भ्रमण गर्दिन भन्नुभएको थियो । नभन्दै उहाँ नाकाबन्दी हटेपछि नै भारतको भ्रमणमा जानुभयो । हामीले उहाँसँगै त्यति बेला भारत भ्रमणमा जाने अवसर त प्राप्त गरेनौँ । तर, त्यतिबेलै पनि भारतका कूटनीतिज्ञहरु, त्यहाँका सञ्चारमाध्यमहरुले एक ढंगले नाकाबन्दी गलत थियो भन्ने महशुस गरेका थिए । अहिले पनि त्यो महशुस उनीहरुले गरेका छन् । त्यही कुरालाई मेटाउन अहिले उहाँहरुको प्रयास जारी छ । मोदीको नेपाल भ्रमण पनि त्यसैको एउटा पार्ट हो भन्ने लाग्छ । नाकाबन्दी नेपालका लागि दुर्भाग्यपूर्ण थियो त्यो भारतका लागि पनि दूर्भाग्यपूर्ण थियो । अनि मोदीको त्यो गल्तीलाई स्वीकार गर्ने अवसर पनि नेपाल भ्रमण हो । त्यसैले गल्ती स्वीकार नै नगर्ने वा गर्न नदिने कुरा पनि त उचित होइन नि ?
मोदीको नेपाल भ्रमण नेपाल प्रवेशको कारण पनि विवादमुक्त बन्न सकेन । मोदीले अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग नगरेर दिल्लीबाट सिधै जनकपुर आएर प्रदेश नम्बर–२ प्रति निकै सद्भाव राख्ने काम भयो भन्ने पनि छ नि ?
त्यो अनावश्यक चर्चा र आलोचना हो । शंखराचार्य नेपाल आउँदा हवाई जहाजबाट होइन वीरगञ्जको गेटबाट आउनुहुन्छ । उहाँहरुको धर्मशास्त्र अनुसार हवाई जहाज नै चड्नुहुन्न । त्यसैले को–कहाँबाट आयो भन्ने कुरा तपशिलका कुरा हुन् । सामाजिक सञ्जालमा लेख्नेहरुले देश चलाउने त होइन नि ? जनतालाई नुन–पानी खुवाउने, पेट्रोल–डिजेल पुर्याउने, गास–वासको व्यवस्था गर्ने फेसबुकमा लेख्नेहरुले होइन नि ? सरकारले नै हो । सरकारले त जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्छ । फेसवुकमा लेख्नेहरुले जे–जे भन्छन् सरकारले त्यही–त्यही गर्दै जाने हो भने हामी ढुंगे युगतिर जानु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । छिमेकीसँग झगडा गरेर त कसरी समस्या समाधान होला र छिमेकीसँग त मिलेरै जाने हो नि । अझ हाम्रो सन्दर्भमा त दुबैतिर बलिया–बलिया छिमेकी छन् । त्यसैले हामीले झगडा गरेर होइन मिलेर जाने हो, छलफल गरेर नै अघि बढ्ने हो । बोलचान नै नगर्ने, आवत–जावत नै नगर्ने, भेटघाट नै नगर्ने, पत्रपत्रिकामा आलोचना मात्रै गर्ने, गालि मात्रै गर्ने गरेर त कसरी कुटनीतिक सम्बन्ध सुधार होला र ?
शारीरिक हाउभाउ, पोशाकले पनि कुटनीति झल्किन्छ भनिन्छ । तपाईँहरु त कुटनीतिक बुझेको व्यक्ति मोदाीको शारीरिक हाउभाउ, पोशाकले कस्तो सन्देश दियो भन्ने लाग्छ ?
नेपाल भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शारीरिक हाउभाउ निकै प्रष्ट देखियो । उहाँले सकारात्मक सन्देश दिनुभएको छ । हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीसँग उहाँले भेटमा दुई पटक अंकमाल गर्नुभयो । हाम्रो प्रधानमन्त्रीको नारा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारालाई नरेन्द्र मोदीले दोहोर्याउनुभयो । भारतको समृद्धिको नारालाई हाम्रो देशको कुनै नेताले दोहोर्याउनु भएको छ ? त्यति मात्र होइन मोदीले जनकपुरमा गरेको सम्मानमा उहाँले मञ्चमा बसेका सबै नेताको नाम लिएर पदसहित सम्वोधन गर्नुभयो । त्यसले के देखाउँछ भने उहाँको प्रत्येक कुरामा ध्यान गएको छ । उहाँले विग्रिएको सम्वन्धलाई सुधार गर्न हरप्रयास गर्नुभएको छ । हाम्रो प्रधानमन्त्रीले पनि सम्वन्ध सुधारका लागि हरप्रयास गरेको देखिन्छ । जानकी मन्दिरमा जाँदा पनि दुबै प्रधानमन्त्रीले एक खाले पोशाक लगाउनु पनि त्यसैको संकेत हो ।
त्यति मात्र होइन मोदीले तराईलाई मात्र होइन, हिमाल र पहाडलाई पनि सद्भाव गर्छु भन्ने संकेत गर्नुभयो । उहाँले समग्र नेपालमा आफ्नो अभिरुची भएको संकेत पनि गर्नुभयो । यो सकारात्मक कुरा हो ।
सुने अनुसार उहाँ भारतको प्रधानमन्त्री हुनु अघि अझ राजनीतिमा प्रवेश गर्नु अघि कति वर्ष मुक्तिनाथमा तपस्यामा बस्नु भएको भन्ने पनि छ । त्यहाँ दामोदर कुण्डमा तपस्या गरेपछि उहाँले आफ्नो नाम नै नरेन्द्र दामोदरदास मोदी राखेको भन्ने पनि छ । त्यसैले हामीले यसलाई सकारात्मक रुपबाट लिनुपर्छ । हो, समस्या नै नभएको होइन, धेरै समस्या छन् । डुवानका समस्या छन्, नाकाबन्दीका समस्या छन् । यस्ता कुरामा पनि हामीले छलफल अघि बढाउनुपर्छ । समस्यालाई कार्पेट मुनी राखेर अनि हाँसेर हात उठाएर स्वागत र वाइवाई मात्र गरौँ भन्ने पनि होइन । यी सबै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि पनि भेटघाट त गर्नै पर्छ ।
मोदीको जनकपुर, पशुपतिनाथ र मुक्तिनाथसम्मको यात्राले पनि उहाँले मेरो तराई, पहाड र हिमाल सबै नेपालसँग समान आस्था छ भन्ने सन्देश पनि हो भनिन्छ नि ?
हो, त्यो हो । मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ ।
मोदीको नेपाल भ्रमणमा प्रदेश नम्बर–२ का मुख्यमन्त्रीको व्यवहार कुटनीतिक मर्यादा विपरीत भयो भन्ने आलोचना छ । तपाईँको दृष्टिकोणमा के–हो ?
मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ । हाम्रो भित्रको समस्या विदेशीको सामू फिराद गर्ने विषय होइन । आफ्नो समस्या आफैँ भित्र समाधान गर्ने कुरा हो ।